काम छोडेर राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई ठेगानमा ल्याउँछु : महानिर्देशक डा. प्याकुरेल – Health Post Nepal
काम छोडेर राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई ठेगानमा ल्याउँछु : महानिर्देशक डा. प्याकुरेल
२०७६ असार १८ गते १५:५८
स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले पदबहाली गरेका छन् । टेकुस्थित स्वास्थ्य विभागमा बुधबार बिहान डा. प्याकुरेलले औपचारिक रूपमा विभागको नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।
पदबहालीसँगै डा. प्याकुरेलले विभागलाई सिस्टममा ल्याउने प्रमुख एजेन्डा भएको बताएका छन् । पदबहालीलगत्तै हेल्थपोस्टसितको कुराकानीमा डा. प्याकुरेलले भने, ‘मेरो २ महिनाको कार्यकालमा पहिलो प्राथमिकता विभागको सिस्टम व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुनेछ ।’ डा. प्याकुरेल आगामी भदौमा उमेरहदका कारण निजामतीसेवाबाट अवकाश हुँदै छन् ।
स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयको निमित्तसचिवसम्मको अनुभव बटुलेको हुनाले विभागको काममा सफल हुने डा. प्याकुरेलको विश्वास छ । ‘धेरै कर्मचारीमा राजनीति गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ,’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘काम नगर्ने कर्मचारीलाई लाइनमा ल्याउँछु, सेवाप्रति उत्तरदायी बनाउँछु ।’
विभाग स्वास्थ्यक्षेत्रको पावरफुल संस्था भएका कारण सबै सिस्टमको व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्ने डा. प्याकुरेलको भनाइ छ । ‘पदबहालीसँगै सबै महाशाखाका निर्देशकहरूसित कुराकानी गरेको छु,’ उनले भने, ‘सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विभागले गर्ने कामलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेर काम अगाडि बढाउनेछु ।’
वि.सं. ०३६ देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका डा.प्याकुरेलसित लामो समयसम्म राजधानीबाहिर, मुलुकका दुर्गम भागहरूमा सेवा गरेको अनुभव छ । तत्कालीन सुदूरपश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक हुँदा उनको १२औँ तहमा बढुवा भएको थियो । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रमुख विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत डा. प्याकुरेलले डेढ महिना निमित्तसचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् ।
४ दशक लामो निजामती सेवाको उत्तरार्धमा २ महिनाका लागि स्वास्थ्यका कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा नियमनको प्र्रमुख जिम्मेवारीमा पुगेका डा. प्याकुरेलले अफ्नो छोटो कार्यकाललाई कत्तिको सार्थक र सम्झनलायक बनाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि, लामो सेवाका क्रममा सबैखाले अनुभव बटुलिसकेकाले डा. प्याकुरेलबाट स्वास्थ्यक्षेत्रले निकै आशा गरेको छ ।